China Hydrate Dry Ice Pack စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ Huizhou
Huizhou Hydrate Dry Ice Pack များသည်အတူတူပင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများရှိစျေးကွက်ထဲရှိရေခဲထုပ်များကိုအခြားနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ Huizhou Hydrate Dry Ice Pack များကိုလတ်ဆတ်သောအစားအစာအတွက်သာမကအပူချိန်အအေးဒဏ်ခံနိုင်သောပစ္စည်းများကိုအအေးမိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ဒီဇိုင်းထုတ်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ပင်လယ်စာများတွင်ရေပန်းစားသည်။ Hydrate ခြောက်သွေ့သောရေခဲအစုံများသည်အပူချိန်ကိုအေးမြသောအပူလွှဲပြောင်းမှုမှတစ်ဆင့်အထုပ်တစ်ခုအတွင်းရှိပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်ဟုယူဆရသည်။ gel ရေခဲထုပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Hydrate Dry Ice Pack များသည်အသုံးမပြုမီရေစုပ်ယူမှုနောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုလိုအပ်သည်။
၁.Huizhou Hydrate Dry Ice Pack များသည်လုပ်ငန်းတူများနှင့်အတူစျေးကွက်ရှိရေခဲရေခဲပုံးများအတွက်အခြားနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ Huizhou Hydrate Dry Ice Pack များကိုလတ်ဆတ်သောအစားအစာများအပြင်အပူချိန်အအေးဒဏ်ခံနိုင်သောပစ္စည်းများကိုအအေးမိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ဒီဇိုင်းထုတ်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ပင်လယ်စာများတွင်ရေပန်းစားသည်။ Hydrate ခြောက်သွေ့သောရေခဲအစုံများသည်အပူချိန်ကိုအေးမြသောအပူလွှဲပြောင်းမှုမှတစ်ဆင့်အထုပ်တစ်ခုအတွင်းရှိပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်ဟုယူဆရသည်။ gel ရေခဲထုပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Hydrate Dry Ice Pack များသည်အသုံးမပြုမီရေစုပ်ယူမှုနောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုလိုအပ်သည်။
2.Hydrate ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲ pack ကိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ် သေးငယ်တဲ့ထပ်ခါတလဲလဲအပိုင်းပိုင်း အတွင်းပိုင်း PCM granular အမှုန့်နှင့်အတူ။ သင်လုပ်နိုင်သည် လွတ်လပ်စွာသင်၏အရွယ်အစားသတ်မှတ် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်မှာအများအပြားသေးငယ်တဲ့အပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူ။ ၎င်းတို့ကိုပင်လယ်ရေကဲ့သို့သောရေများကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုပ်ပိုးခြင်း (သို့) ခွုံခြင်းများအတွက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးကိုတန်ဖိုးထားကြသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေခဲခြောက်သွေ့မှုအတွက်အပြင်ဘက်အိတ်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည် ဇီဝပျက်စီးခြင်း ယာဉ်စက္ကူ.
၁။ ဟိုက်ဒရိတ်ခြောက်သွေ့သောရေအေးစက်သည်အေးခဲ။ လေပူခြင်းနှင့်စီးဆင်းခြင်းမှတစ်ဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအေးစေသည်။
သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပြင်ဆင်ထားသည့်အစားအစာများ၊ အေးခဲနေသောအစားအစာများ၊ ပန်းများ၊ နို့စသည်တို့နှင့်အထူးသဖြင့်ပင်လယ်စာနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သောလတ်ဆတ်သောအစားအစာလယ်ကွင်းများအတွက်၎င်းတို့ကိုလတ်ဆတ်သော၊ ရေသို့မဟုတ်ထုပ်နှင့်လိုအပ်သောခေါက်။
၃။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအသုံးပြုရန်အတွက်၎င်းတို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီ၊ နာကျင်မှုသို့မဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေရေးအတွက်အဖျားကျစေနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် lunch စခန်းချခြင်း၊ ပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်း၊ လှေလှော်ခြင်းနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းတို့တွင်အစားအစာများသို့မဟုတ်အချိုရည်များကိုအအေးခံရန်အိတ်ထဲ၊ အေးသောအိတ်ထဲ၌ရေထည့်ထားသောရေခဲဗူးကိုထည့်လျှင်၎င်းသည်အပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုရန်အလွန်ကောင်းသည်။
4. ထို့အပြင် အကယ်၍ အေးခဲနေသောရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ရေခဲသေတ္တာကိုသင်၏ရေခဲသေတ္တာထဲသို့ထည့်ပါက၎င်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားချွေတာခြင်းသို့မဟုတ်အအေးဓာတ်ကိုလွှတ်ပေးခြင်းနှင့်ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်တွင်ရေခဲသေတ္တာကိုပိတ်ထားခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ငါး၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ဂဏန်းအစရှိသောစသည်တို့ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရေအားလျှပ်စစ်ခြောက်သွေ့သောရေခဲအစုံများပါ ၀ င်သည်။
အပိုင်းပိုင်း / စာရွက် အရွယ်အစား(စင်တီမီတာ) အိတ်ပစ္စည်းများ အဆင့် - ပြောင်းလဲမှုအပူချိန်
9 ၂၈ * ၃၉
12 ၂၈ * ၃၉
24 ၂၈ * ၃၉
၁။ ဟိုက်ဒရိတ်ခြောက်ရေခဲထုပ်သည်ပုံမှန်ဂျယ်လ်ရေခဲအိတ်အတွက်အခြားနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကျိုးကျေးဇူးမှာသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုအေးခဲနေလျှင်ပင်ခြုံနိုင်သည်။
2. အဆိပ်မရှိသော, သူတို့နှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးနေကြသည် ခံတွင်းခံတွင်းအဆိပ်သင့်မှုအစီရင်ခံစာ။
3. လွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများသည်အမှုန့်များနှင့်တူသည်) - ရေမဆေးမီရေစိုခံခြောက်သွေ့သောရေခဲတုံးများသည်ပါးလွှာ။ စိုစွတ်နေသောကြောင့်ရေမွှေးခင်သင့်အတွက် ပို၍ တန်ဖိုးရှိသောနေရာကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
5. ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောသူတို့သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့မတိုင်မီထပ်ခါတလဲလဲသုံးနိုင်သည်။
၂။ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ၁၅ မိနစ်ခန့်ရေကိုအပြည့်အဝစုပ်ယူပြီးအသုံးမပြုခင်ရေခဲသေတ္တာ၊ ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်အအေးခန်းထဲတွင်လုံးဝအေးခဲအောင်လုပ်ပါ။
4. Hydrate Dry Ice Pack သည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့မတိုင်မီထပ်ခါတလဲလဲသုံးနိုင်သည်။
5. အကယ်၍ Hydrate Dry Ice Pack သည်ရေနည်းသောကြောင့်ပါးလာလျှင်၎င်းသည်ကောင်းစွာလည်ပတ်မှုသေချာစေရန်ရေအလုံအလောက်ပြန်စိမ်ပါ။
နောက်တစ်ခု: ရေထိုးရေခဲ Pack ကို